URenshi Guang waseNewsill, sivivinye leli gundane ngabadlali | Izindaba zamagajethi
URenshi Guang waseNewsill, sivivinye leli gundane ngabadlali bamageyimu
Abadlali bebhola beya ngokuya benamabhuthi aklanywe kangcono, nesayensi eningi ngemuva kwabo. Kunjalo nangamabhayisikili abagibeli bamabhayisikili namasudi okubhukuda kwababhukudi. Noma kunjalo, I-eSports nayo ifuna imbobo yayo encane ku-R & D futhi ibingeke ibe ngaphansi, kunemikhiqizo eminingi esebenza futhi ukusiza Abadlali ukuthuthukisa amakhono akho.
Namuhla sinokuhlangenwe nakho kweNewskill, idivayisi esizohlaziya ngayo namhlanje yiRenshi Guang, igundane elisha I-gamer enkampanini ezothola okuningi kuwe. Hlala wazi ukuthi yiziphi izici namandla ale gundane elisha.
Njengenjwayelo, sizohlaziya uchungechunge lwezici ezifana nokuklama, izinto zokusebenza nokusebenza, futhi sisebenzise inkomba esihlala sikushiya ungaya ngokushesha esigabeni esibonakala sikulungele kakhulu. Futhi ngaphandle kokulibala, asihambe.
1 Newskill, singathini ngomkhiqizo
2 Izici eziyinhloko zobuchwepheshe
3 Ikhwalithi yezinto zokwakha nokuklama
4 Isoftware eyenziwe ngezifiso
5 Okuqukethwe kwebhokisi, intengo nendawo yokuthenga
Newskill, singathini ngomkhiqizo
Ekupheleni konyaka we-2015 kwafika iNewskill, uphawu olwalufuna ukuguqula indlela igama elaligama ngayo gaming ibisetshenziswa kuze kube manje kwi-Hardware eminingi. Abaningi bagxume kule bandwagon ngaphandle kokunikeza noma yiluphi uhlobo lwesici esizothuthukisa ngempela noma sithuthukise izici abadlali abanazo kakade. Inhloso yomkhiqizo gaming Kukhipha la makhono, ukwenza i-gamer ikhululeke ngokwengeziwe ithuba lokusebenzisa umsebenzi wayo. Lo mkhiqizo weza ukuncintisana ngqo nezinye ezisunguliwe njenge Razer y Ama-ironSeries, futhi kakhulu okwenzayo. Kuze kube manje sebethole ukuqashelwa kwabadlali abaningi, okungenani labo abaqala, ngenxa yokuba khona kwabo njalo kuma-PC Components.
Izici eziyinhloko zobuchwepheshe
Okunye okuvelele kwalokhu URenshi Guang ukuthi ine- Inzwa ye-Pixart 4460 optical kuze kufike ku-16.000 DPI, akukho okunye futhi akukho okuncane. Le nzwa ingcwelisiwe, futhi ochwepheshe abaningi nabalandeli bensimu bayazi kahle. Ngale ndlela, iyakwazi ukumelana nama-50G okusheshisa namasentimitha angama-250 ngomzuzwana. Inhlanganisela ephelele ukuze ukunemba kungabi yinkinga uma kukhulunywa ngokuvuna impumelelo. Ngempela, kuzoncika ezandleni zakho ukushaya ilitshe noma cha.
Inezinkinobho eziyisithupha zemishini, akukho ukuthinta noma uhlelo olufanayo. Ngasikhathi sinye, inamaphrofayli wesoftware amaningi okulungisekayo: i-FPS, i-MMORPG, i-MOBA ne-RTS. Izinga lokuvota liyi-1000 Hz / 1ms, okuveza futhi amandla alo obuchwepheshe. Ngokuqondene nekhebula le-USB, igolide elihlanganisiwe ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu ekudlulisweni kwedatha, ngenkathi ikhebula elibonakalayo limbozwe ngocingo oluboshiwe, olusinika lona ubude obuphelele bamamitha ayi-1.8, Ngeke sibe nezinkinga noma ngabe i-PC yethu itholakala phansi noma etafuleni noma etafuleni.
Ijubane eliphezulu elifinyelela kulo yi-250 IPS, ngenkathi eyakhe ukushesha okuphezulu kufinyelela ku-50G. Ubukhulu bayo obuthile bungu- 126 x 68 x 39 millimeters, futhi sinesisindo esingu-130 gr. Ngokusobala iyahambisana nawo wonke amapulatifomu eWindows afana neWindows 2000, XP, Vista, 7, 8 futhi kunjalo neWindows 10, intandokazi yabadlali bamageyimu manje.
Ikhwalithi yezinto zokwakha nokuklama
Ngokushesha nje lapho ulikhipha ebhokisini, uyabona ukuthi awubheki noma yiliphi nje igundane. okufanayo Inokumbozwa kwenjoloba kwemvelo ebusweni bonke. Lokhu kuthinta irabha kwemvelo kusinikeza induduzo nokuhlanzeka, singasho ukuthi indawo yokuxhumana izinzile ngokwanele ngathi ukuze sizizwe sikhululekile phakathi kwamahora amade emidlalo yevidiyo. Ngendlela efanayo, ikhebula, njengoba sesishilo, linengubo eboshwe nge-fiber eqinisekisa ikhwalithi nokuqina. Impela, isisindo sama-gramu ayi-130 sanele ukuthi siziphathe ngokukhulu ukushesha.
Kodwa-ke, asitholanga ukwehluleka, idizayini yakudala evumelana nesandla, intofontofo, kepha ayisishiyi sici esibonakalayo esimangazayo. Okubonwayo kuphethe ama-RGB ayo e-LED akwazi ukunikela ngemibala efinyelela ezigidini eziyi-16,8. Ukhiye wama-LED futhi ukhombe ukuthi yimaphi amaphrofayli wesoftware esisebenza ngawo ngaleso sikhathi. iqiniso ukuthi lishiya umuzwa impela gaming, sibona ukukhanya kudlula kokubili ilogo yenkampani kanye nesondo, futhi kuzoqala ukucwayiza lapho sishiya igundane liphumule.
Izinkinobho zinokuhamba okuqondile, laba ababili ohlangothini lwesobunxele Zizosisiza ukusungula noma yikuphi ukucushwa esikufunayo, banokumelana okulungile nokuhamba ukuze singabacindezeli ngephutha. Izinkinobho zesenzo sokunxele nesokudla uma "ethambile" kakhulu, lokhu kungasebenzela thina naphezu kwenkambo yayo emfushane nokuthi kuzoba lula kangakanani ukwenza isenzo, noma kunjalo, singadlala ngathi size sijwayele. Ebuka isondo, futhi inembatho enjoloba yemvelo nenkinobho, inembile impela futhi isinika ukumelana okwanele ukuze sikwazi ukuzulazula kumamenyu womdlalo ngokunethezeka.
Ngezansi sinamaphedi amathathu asendaweni ephezulu emaphakathi, nezindawo ezingezansi kwesokudla nangakwesobunxele. La maphedi ayashintshana uma egqokiwe, iNewskill ingathanda ukufaka okunye kwiphakeji. Ngenkathi inzwa eyi-16.000 DPI inesimo esimaphakathi. Ekugcineni, engxenyeni engenhla ngaphambi nje kwesondo sinenkinobho yokufinyelela esheshayo ezosivumela ukuthi sishintshe ngaphandle kokulahlekelwa isenzo esenziwe phakathi kwamaphrofayili amane womdlalo esiwalungiselele ngesoftware, esizokhuluma ngayo ngokulandelayo.
Isoftware eyenziwe ngezifiso
Isoftware eyenzelwe kahle ibingalahlekile ukuze sikwazi ukuthola okuningi kule gundane, inesoftware ekhethekile yokumisa igundane lakho lokudlala njengoba ilungele imodi yakho yomdlalo. Kusuka ku-Backlight, ama-macros, amaphrofayili ahlukile ngokuzwela, i-DPI noma imvamisa yesampuli, ingashintshwa ngokuphelele, ngaleyo ndlela inikeze amathuba angapheli. Siyisebenzisile futhi iqiniso ukuthi inembile futhi iyadingeka uma sifuna ukukhipha ujusi kuleli gundane, okuyinto imikhiqizo eyengeza kuyo gaming maduzane
Okuqukethwe kwebhokisi, intengo nendawo yokuthenga
Okuqukethwe yibhokisi kuyamangalisa, INewskill ithuthukisa abathengi bayo kahle kakhulu, sizothola amaphedi ambalwa okushintshwa, iphosta yeNewskill enamabinzana ayinganekwane avela emidlalweni yevidiyo, isiphanyeko somnyango sokuxwayisa uma sidlala, ikhadi lolwazi, izitika, ikhadi leNewsill VIP nokuthwala okubucayi isikhwama. Mangisho ukuthi ngangikuthanda kakhulu ukupakisha, futhi ngiyakwazisa.
Ungayithenga nge iwebhusayithi yabo naku-Amazon ngo- € 49,95 ku- LONTO. Njengoba ubungalindela kumkhiqizo onjalo, sinesiqinisekiso seminyaka emibili, kepha iNewskill isisinikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-31.
Ngokwami ​​ngizithole ngikhululekile impela, ngithole igundane elifanele, elinekhwalithi yokwakha emangalisayo, elinganiselwe ngentengo nekhwalithi. Mhlawumbe inkinobho eyodwa ngaphezulu ayikho, noma umklamo onolaka ngokwengeziwe, kepha iNewskill lapha ibikhathazeke kakhulu ngokusinika umkhiqizo osebenza kahle.
Inkinobho eyengeziwe ayikho
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » URenshi Guang waseNewsill, sivivinye leli gundane ngabadlali bamageyimu
Ungazi kanjani ukuthi ubani ovakashela i-Facebook yami
Lawa ngama-laptops alula kakhulu futhi anzima kakhulu, amathebulethi nama-mobiles okulungisa